ဘယ်လို နားလည် ပေးကြမလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဘယ်လို နားလည် ပေးကြမလဲ?
ဘယ်လို နားလည် ပေးကြမလဲ?
Posted by မောင်လင်းငယ် on Aug 20, 2010 in Drama, Essays.. | 8 comments
မြင်းကွင်းထဲမှာ တွေ့နေကြ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို အမှတ်တမဲ့ မြင်မိရင်း စဉ်းစားထားတာလေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
မွေးနေ့လေး တစ်နေ့ ဖြစ်လို့ အဲဒီနေ့မှာ ဘုရားသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရား နားရောက်ခါနီးမှာ အသက် ဆယ့်နှစ်ကျော်ကျော် ရှိတဲ့ ကောင်းလေးလေး တစ်ယောက် အနားကို ရောက်လာတယ်။
အစ်ကို .. ညီလေး အမေက မျက်စိ မမြင်လို့ စားစရာလေး ၀ယ်ကျွေးချင်လို့ ပိုက်ဆံလေး ပေးခဲ့ပါတဲ့။
ကျွန်တော်လည်း မွေးနေ့ လည်းဖြစ်နေတာ ကြောင့် စိတ်ကောင်း ၀င်နေတာမို့ ပိုက်ဆံ နည်းနည်းပါးပါး ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးပြီး ပြန်ခါနီးမှာ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံပေးလိုက်တဲ့ ကောင်းလေးက အသက်ကြီးကြီး လူကြီးတစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံ ပေးနေတာကို မြင်လိုက်ပါတယ်။ မြင်စကတော့ အမှတ်တမဲ့ ပါဘဲ။ အဲဒီ အကြောင်းအရာကို လည်း သတိမရပါဘူး။
တစ်ညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စကားပြောရင်းနဲ့ အဲဒီ အကြောင်းကို ရောက်သွားပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်တို့က ညမှာသာ လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ထိုင်ဖြစ်တာပါ။ ည ခုနှစ်နာရီ ရှစ်နာရီ လောက်ကနေ ဆယ့်နာရီ ကျော်ကျော် လောက်ထိ ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ )
ကျွန်တော်တို့ ထဲက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က အဲဒီ အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ တောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေမှာ ခေါင်းတွေ ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီ ခေါင်းတွေက မိဘမရှိတဲ့ ကလေးတွေ၊ လေလွင့်နေတဲ့ ကလေးတွေ ကို လက်သပ်မွေးပြီးတောင်းခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ညနေပိုင်းကြရင် အုံနာ ကြေးပေးရပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ပြီးတော့ အဲဒီကောင်လေးတွေက အုံနာ ကြေး အပြည့် မပေးဘူးဆိုရင်လည်း ရိုက်ပါတယ်။
ဒါအပြင် နေရာလိုက်ပြီး အုံနာ ကြေးက အနည်းအများရှိပါတယ်။ လူစည်တယ်ဆိုရင် အုံနာ ကြေးက ပိုများပါတယ်။ လူရှင်းတဲ့ နေရာ ဆိုရင် အုံနာ နည်းပါတယ်။
အဲဒီကောင်လေးတွေကလည်း သက်သာမှန်းသိတော့ အလုပ်ကို မလုပ်ချင်ကြတော့ပါဘူး။ တစ်ခါက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှင်ဆီကို ပိုက်ဆံလာတောင်းတဲ့ အခါ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက
ဟေ့ ကောင်လေး မင်း ငါ့ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်မှာလား
လို့ မေးတဲ့အခါ အဲဒီကောင်လေး ကျွန်တော်တို့ အနားကနေ တစ်ခါတည်း ထွက်သွားပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးသူတို့ က ဆင်းရဲမှာ ကြောက်နေတတ်ကြပါပြီ။
တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လည်း အသက်ခြောက်ဆယ့် နားလောက် အဘွားကြီး တွေလည်း ပိုက်ဆံ တောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက အသက်အရွယ်ကြောင့် အလုပ်မလုပ်နိူင်တော့လို့ တောင်းကြတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အသက် လေးဆယ့်လောက် အမျိုးသမီးကြီးတွေ တောင်းတာကို လည်း တွေ့ ဖူးပါတယ်။ လူပုံစံက သန်သန်မာမာ ကြီးတွေနဲ့ပါ။ မြင်ရတာတွေက ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ အချိုးအစား မကျ ကြပါဘူး။
စကားမစပ် ဒီနေရာ လေးကနေ သင်တို့ ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါရစေ။
” သင်တို့ကော ငွေကို အကျိုးရှိရှိ သုံးတတ်ကြပါပြီးလား။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေမရှိအောင် ငွေကို ကိုင်ထားတတ်ပါ ပြီးလား ”
(မှတ်ချက်။ ။ သင်က ဘယ်အသက်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ သင်က အသက်နှစ်ဆယ့် ကျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အသက်လေးဆယ့် ကျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် at any age!
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိူင်ပါတယ်။ )
ကျွန်တော်က အသက်နှစ်ဆယ် ၀န်းကျင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ငွေကို အကျိုးရှိရှိ၊ ဘေးကင်းကင်း မသုံးတတ်သေးပါဘူး။
သင်တို့ကော ငွေကို ဘေးကင်းကင်း သုံးတတ်ကြပါ ပြီးလား???
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တစ်ဝက်လောက်ငယ်တဲ့ ဆယ့်နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံ ပေးတာက အလွန် ဆိုးကျိုးရှိတယ် ဆိုတာ တွေးမိမလား မသိဘူး။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဒါက အလွန် ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
ကဲ….ဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ???
Think harder!!! May haveacreative thinking in Your mind.
ဆယ်နှစ်ကျော် ကလေးမှ မဟုတ်ဘူး အသက်ကြီးလို့ သေခါနီးတောင် ရုတ်တရက် အလကား ရလိုက်ရင် ဘယ်မှာ သုံးရမှန်းမသိဘဲ ဘ၀ပျက်တဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ
ခက်တာက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာက သနားစာနာတတ်လွန်းတဲ့လူတွေများနေတာပါ။
တစ်ချို့မှန်သလိုလိုနဲ့လွဲနေသောအတွေးလေးက ” ကိုယ်ကတော့စေတာနဲ့ လှုလိုက်တာ သူဘာသာသူဘာလုပ်လုပ်”
လို့ဆိုတဲ့ပြီး လာတောင်းတိုင်း ပေးကြတော့တာပါဘဲ။
လုပ်စားတာထက် တောင်းစားတာက ပိုသက်သာတာကိုး၊
ဒီပြဿနာက ဘယ်တော့မှ မပပျောက်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။
သဘောတရားအရတော့ စေတနာဟာ ဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲသည်တွက် ခေါင်းဆောင်တွေကို ချေမှူန်းပြစ်သင့်ပါတယ်
တရားသဘောအရကတော့ အလှူဆိုတာက အလှူ ခံသူနှင့် အလှူပေးသူရဲ့ အချေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်
သေချာတာကတော့ တောင်းစားတဲ့သူတွေ များလာတာဟာ နိုင်ငံတိုးတက်မဲ့လမ်းစ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ… ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး လူတိုင်း သင့်တော်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ၀င်ငွေ စီးကြောင်း တစ်ခု ရှိသင့်ပါတယ်… အလကား ရတိုင်း အချောင် လိုချင်ကြတဲ့ စိတ်ကို တော့ ပြင်နိုင်ရင် ကောင်းမှာပါ… အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်၊ ငွေရှာချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် ၀င်ငွေရနိုင်မဲ့ နေရာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်…
ခုလို ကျွန်တော့် အက်ဆေးကို ဝေဖန်ပေးတဲ့ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။
သင်တို့ အနေနဲ့ အဲဒီတောင်းစားတဲ့ ကလေးများကို စေတနာရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စေတနာရှိသလောက် အစားအစာကို ၀ယ်ကျွေးလိုက်ပါ။
အလွန် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ပိုက်ဆံကို သူတို့တွေရဲ့ လက်ထဲကို ထည့်မပေးလိုက်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျနော်ကြားဖူးတာလေး တစ်ခုရှိတယ်။ လိုက်လံတောင်းရမ်းသူတွေကို ဖမ်းတဲ့ ကားတစ်စီး ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တောင်းရမ်းစားသောက်သူ တွေကိုကားပေါ်အကုန် ဆွဲတင်ကြတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ တတောင်းစားတွေ ကားပေါ် တင်တာကိုမြင်တော့ လူတစ်ယောက်က ပြေးလားပြီး ညှိရအောင်လေ ဟုပြောပါတယ်။ ထို့နောက် ကားပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီး အဲဒီလူက မင်းက ဘယ်သူလဲ လို့မေးတယ်။ အဲတော့ သူက တတောင်းစားခေါင်း လိုဖြေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဟိုလူက မင်းပါကားပေါ်တက်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်။